२५ बर्षकै उमेरमा प्रेक्षाको आत्महत्या
बिहिवार, जेठ १५, २०७७ कर्णाली अपडेट
चर्चित भारतीय सिरियल कलाकार प्रेक्षा मेहत्ताले आत्महत्या गरेकी छिन । ‘क्राइट पेट्रोल, लाल इश्क, मेरी दुर्गा’ जस्ता सिरियलमा काम गरेकी प्रेक्षाले सोमबार आफ्नै घरमा आत्महत्या गरेकी हुन् ।
गएराती उनका परिवारका सदस्यहरु तास खेलिरहेका थिए । प्रेक्षा भने एक्लै बसिरहेकी थिइन् । बेलुकी १० बजे आफ्नो कोठामा पुगेपछि प्रेक्षाले सामाजिक संजाल इन्स्टाग्राममा ‘मानिसको सपना मर्न थाल्नु नै सबै भन्दा खराब समय हो’ भनेर लेखेकी थिइन् ।
मंगलबार बिहान पंखामा झुन्डिएको अवस्थामा उनको लास परिवारका सदस्यले देखेका थिए । प्रेक्षा मनोरञ्जनको दुनियाँमा पाइला राख्ने परिवारकै पहिलो सदस्य थिइन् ।
प्रकाशित मिति: बिहिवार, जेठ १५, २०७७, १२:३५:३२
शुक्रवार, जेठ १६, २०७७ कर्णालीखबर
गीतकार रत्नशमशेर थापाको निधन भएको छ । बिहीबार नर्भिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको निधन भएको संगीतकार महेश खड्काले जानकारी दिए । बुधबार बेलुकी अस्वस्थ भएपछि उनलाई उपचारका लागि नर्भिक अस्पताल लगिएको थियो । उनको ८३ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो । पुरा पढ्नुहोस्
रुकुम घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न पूजाको माग
‘समानता नै मानवताको पहिलो आधारशीला हो भन्ने तथ्य कहिले बुझ्छौं होला हामीले ? रोगहरू पनि नयाँ नयाँ आउन थालिसक्यो । अब हामी रोगसँग लड्नु कि छिमेकीको बल मिचाइसँग लड्नु कि आफ्नै घरभित्रको अन्तरजातीय विभेदसँग लड्नु । कि सदाझैं नारी अस्मितासँग खेल्न खोज्नेविरुद्ध लड्नु ? पूजाले फेसबुकमा लेखेकी छन । पुरा पढ्नुहोस्